ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ ကြွက်သားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင်းအတွက် စိုးရိမ်နေရတဲ့ ဂွါဒီယိုလာ – MyMedia Myanmar
ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ ကြွက်သားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင်းအတွက် စိုးရိမ်နေရတဲ့ ဂွါဒီယိုလာ
မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်း အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ အက်စတွန်ဗီလာ အသင်းကို ၂ ဂိုး- ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမား နှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ ကိုင်လ် ဝေါလ်ကာ နဲ့ ကယ်ဗင် ဒီဘရိုင်းတို့ နှစ်ဦး အသီးသီး ဒဏ်ရာပြဿနာ နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မန်စီးတီး အသင်း နည်းပြ ဖြစ်သူ ပပ်ဂွါဒီယိုလာ ကတော့ မန်စီးတီးကြယ်ပွင့် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဒီဘရိုင်း အနေနဲ့ ကြွက်သားဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နဲ့ နောက်ထပ် နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို သူ့အနေနဲ့ စောင့်မျှော်နေကြောင်း ပွဲအပြီးမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကယ်ဗင် ဒီဘရိုင်းအနေနဲ့ ဒဏ်ရာပြဿနာ‌ကြောင့် ပွဲကစားချိန် ၅၉ မိနစ်အရောက်မှာ ဂါဘရီရယ် ဂျီးဆပ် နဲ့ လူစားလဲခဲ့ရတာ ဖြစ်ကာ ကိုင်လ် ဝေါလ်ကာ ကလည်း ပထမပိုင်း ပွဲကစားချိန် ၂၈ မိနစ် ကတည်းက ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့် ကစားပွဲကို ဆက်လက်ကစားနိုင်တော့ခြင်း မရှိပဲ ဇင်ချန်ကို နဲ့ လူစားလဲခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာ သတင်းထောက်‌တွေက ဂွါဒီယိုလာကို အဆိုပါ ကစားသမားနှစ်ဦး ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတဲ့ အခါမှာတော့ အခုလိုပဲ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ “ ပထမဆုံး အနေနဲ့၊ ကျွန်တော် ဆရာဝန် နဲ့ စကားမပြောကြည့်ရသေးပါဘူး။ ကိုင်လ်က တစ်ခုခု ခံစားခဲ့ရတာကြောင့် လူစားလဲဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ၊ အဲ့ဒါက အသေးစားဒဏ်ရာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ”
“ ကယ်ဗင် ကတော့ သူ့ရဲ့ လက်ကို ခြေထောက်ပေါ်မှာ တင်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒါက ကြွက်သားဒဏ်ရာ တစ်မျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားက ဘာမျှော်လင့်လို့လဲ ? တစ်ခါတစ်ရံ ဒီလိုပွဲစဉ်မျိုးတွေမှာ ဒီလိုအရာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာ က သာမန်ပါပဲ ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ အဖွင့်ဂိုး ကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ ဘာနန်ဒို ဆေးလ်ဗားရဲ့ဂိုး ကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ရိုဒရီ အနေနဲ့ လူကျွံ အနေအထားမှာ ရောက်ရှိနေတယ် ဆိုပြီး အက်စတွန်ဗီလာနည်းပြ ဒင်းစမစ် က စောဒကတက်မှုတွေ ရှိတာကြောင့် အနီကတ်နဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မန်စီးတီး နည်းပြ ဂွါဒီယိုလာကတော့ အဆိုပါ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ ကျွန်တော် TV ပေါ်က ပုံရိပ် ကိုမကြည့်မိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ လူကျွံတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စောဒကတတ်တာကို သိပါတယ်။ ပြီးတော့ VAR လည်း ရှိနေတယ်လေ။ ကစားသမားက လူကျွံအနေအထားမှာရောက်နေတဲ့အခါ အခုလို ဘောလုံးပေးပို့တာမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီး ပြဿနာ‌တက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်၊ ကစားသမားအနေနဲ့ နောက်ကို ပြန်ဆုတ်တယ်၊ တစ်ဖက်က ကွင်းလယ်ခံစစ်က ဘောလုံးကို ဖြတ်ထုတ်တယ်၊ အဲ့‌ဒီနောက် တန်ပြန်တိုက်စစ်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် VAR ရှိနေခဲ့တယ်လေ၊ အကယ်၍ အဲ့ဒီဂိုးကသာ လူကျွံရင် ဂိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးမာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် အရိုးသားဆုံးဖြေရရင် ကျွန်တော် အဲ့ဒါကို မကြည့်မိခဲ့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် သူတို့ စောဒကတတ်တာကိုလည်း နားလည်ပါတယ်၊ ယေဘုယျ အားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကစားခဲ့တာ ကောင်းခဲ့ပါတယ် ” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
The post ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ ကြွက်သားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင်းအတွက် စိုးရိမ်နေရတဲ့ ဂွါဒီယိုလာ appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-21T11:31:01+06:30January 21st, 2021|MYSPORT MYANMAR|